Afar Xiddig oo waa wayn oo ka tirsan Tottenham oo caawa wajahaya kooxdoodii hore ee Ajax… + SAWIRRO – Gool FM
Afar Xiddig oo waa wayn oo ka tirsan Tottenham oo caawa wajahaya kooxdoodii hore ee Ajax… + SAWIRRO
(London) 30 Abriil 2019. Kooxda Tottenham ee ka dhisan caasimadda dalka Ingiriiska ee London ayaa caawa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta Naadiga reer Holland ee Ajax kulanka lugta koowaad ee wareegga afar dhammaadka tartanka Champions League, marka ay saacadda geeska Afrika tahay 10:00 habeennimo.
Tottenham ayaa ciyaareysa semi-finalka tartanka European Cup/Champions League markii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedkii 1961-62-kii, markaasoo ay ku reebtay Benfica.
Haddaba ma ogtahay in afar xiddig oo waa weyn oo ka tirsan Tottenham ay caawa wajahayaan kooxdoodii hore?
Afarta ciyaaryahan ee Spurs ee kala ah; Christian Eriksen, Davinson Sanchez, Jan Vertonghen iyo Toby Alderweireld ayaa caawa ka hor tagaya kooxdoodii hore ee Ajax.
Xiddiga Danish-ka ee khadka dhexe ka dheela, Eriksen ayaa Tottenham kaga soo dhaqaaqay Ajax xagaagii 2013-kii.
Spurs ayaa rajaynaysa inay dib uga soo kabato caawa guuldarradii ugu horreysay ee ku soo gaarta garoonkeeda cusub, taasoo ay kala kulmeen naadiga ay ku xafiiltamaan London ee West Ham United Sabtidii.
Difaaca dhexe ee Sanchez ayaa Naadiga reer London ugu soo dhaqaaqay lacag rikoorka kooxda ah oo u dhan 42 milyan oo gini sanadkii 2017-kii.
Vertonghen ayaa bandhig wacan ka sameynaya qalbadda dhexe ee daafaca Tottenham kaddib markii uu dib uga soo laabtay Ajax sanadkii 2012-kii.
Xiddigii hore ee Ajax, Alderweireld ayaa xiriir fiican oo dhanka difaaca ah la leh ciyaaryahanka Spurs ee Vertonghen.
Afartaan ciyaaryahan Christian Eriksen, Davinson Sanchez, Jan Vertonghen iyo Toby Alderweireld ayaana caawa wajihi doona kooxdoodii hore ee Ajax.
RASMI: John O'Shea oo ku dhawaaqay inuu guud ahaan ciyaaraha isaga fariisan doono